Ogaden News Agency (ONA) – Odayaasha Dhaqanka Iyo Hogaanka Ciidanka ONLF : Dhulka Anagaa Lehe –
Odayaasha Dhaqanka Iyo Hogaanka Ciidanka ONLF : Dhulka Anagaa Lehe –
Shalay oo ay taarikhdu ku beegantahay 18/11/2012 ayay shir balaadhan isugu yimaadeen Oday dhaqameedka Ogadeniya. Shirka oo kadhacay dalka Koonfur Africa ayaa ahaa midkii ugu ahmiyada waynaa waxaana isugu yimid wax garadka u dhashay Ogaadeeniya. Shirkan oo lagu lafa guray xaalada dalka Ogadeniya uu hada ku sugan yahay lagagna tashanayey marxaladaha soo korodhay, ayaa waxaa soo qaban qabiyey Maamulka jaaliyada Koonfur Afrika ee Ogadeniya JOKA.
Waxaa Shirka gudoominayey Gudoomiyha JOKA Halgame Bashiir Muxumed oo ku soo dhaweyey sidii caadada ahayd Madaxa Arimaha diinta iyo dacwada halgame sheekh Ahmed sheekh Muxumed (sudaani). Sheikh oo wacdi qiimi leh ka jeediyay shirka ayaa aad ugu dheeraday Xuququda dadaka islamka ah, xaqa iyo waajibka ay isku leyahiin.
Jawiga shirka ayaa marqudha isbadalay iyadoo sacab diiran lagu soo dhaweeyey markii uu khadka Telphoneka soo galay Hogaanka Gaashaan Dhiga JWXO N/hure Sheikh Deeq oo ka soo hadlayay jooga jiida hore ee difaaca dalka Ogadeniya. Halgame SH/Deeq ayaa warbixin dheer siiyey Odayasha ugana waramay xaalada dalka iyo dagaalada ka socda Ogadeniya. N/hure Sheekh Deeq oo ay dad badani ku riyoon jireen bal in ay mar uun arkaan ama maqlaan codkiisa iyo fikradihiisa ka soo maxaanaya maskaxda fayow ee geesinimada iyo halgan jeceylka ay ka dambayso ayaa odayaashii fadhiyay shirka ka haqabtiray xaaladaha dhabta ah ee dalka Ogadenia uu ku sugan yahay. Cuqaasha iyo waxgaradka ayaa lasiiyay fursad ay su’aalo ku waydiin karaan masuulka ugu sareeyay cududda ciidamada JWXO, isagoo halkaa uga bixiyay kuna siiyay jawaabo waafi ay oo si wayn u qanciyay dhamaan cuqaasha , waxgaradka iyo aqoon yahankii fadhiyaya shirka.
Waxaa kaloo shirka qudbado taariikhi ah ka jeediyay masuuliyiin kamid ah gudiga fulinta ee JOKA , sida hogaanka abaabulka iyo arrimaha bulshada Gaashaanle sare Cade Axamad Sulub oo si qodo dheer ugu xogwaramay in ay odayaashu yihiin maskaxdii waddanka loona baahan yahay mar kasta iyo meelkasta.
Waxaa kaloo khudbad soo jiidatay dadwaynaha shirka ka jeediyay hoggaanka dhaqaalaha ee JOKA mudane Cabdi fataax Xassan Caran. Hoggaanka ayaa siwaafi ah u bayaamiyay tariikhada sooyaalka ah ee uu soo maray gayiga Ogadenia.
Odayaasha dhaqanka oo ahaa mashiinka ugu xooga badan ee shirka ayaa si xamaasad iyo wadaniyad ku dheehantahay uga jawaabay Video si faxshinimo ah loogu shaaciyay warbaahinta cadowga kaas oo si axmaqnimo ah loogu bahdilay dhalinyaro si qasab ah looga duubay arimo dhaqanka Somaaliyeed iyo diinta islaamka midna aan u fiicnayn ood arkayso in laga yeedhsiinayay dhalinayardii ku hadlaysay. Arimahaa ayay odayaasha ku tilmaameen wax axmaqnimo ah oon sinaba ugu haboonayn in dacaayad ahaan loo adeegsado.
Shirka ayaa si wayn u cambaareeyay cabudhinta lagu hayo odayaasha sida bahdilka iyo qasabka ah la isugu yeedhay ee laga soo uruuriyay gobalada Ogadenya laguna qasbayo inay saxiixaan wax loogu yeedhay inuu yahay dastuurka Itobiya iyagoon aqoonin loona akhriyin waxa uu yahay.
Guntii iyo gunaanadkii shirkan ayaa ahaa mid ahmiyad wayn u leh qaranka dulman ee S.Ogadenia marka la eego dareenka ay ka muujin hayeen waxgaradka Ogadenia ee shirka kasoo qaybgalay.
Codadka Odayaasha oo aad u xiisa badan kala soco Radio Xorriyo.